Ny hevitry ny minisitra momba ny Maharashtra fizahantany Post-COVID
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Ny hevitry ny minisitra momba ny Maharashtra fizahantany Post-COVID
Pao fizahan-tany Maharashtra COVID-19
Minisitry ny fizahan-tany, tontolo iainana, Protocol, Governemanta an'ny Maharashtra, Aditya Thacker Andriamatoa Aditya Thackeray, androany dia nilaza fa hahita fisondrotana lehibe amin'ny fizahan-tany ity faritra ity aorian'ny vanim-potoana COVID.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niaraha-niasa tamin'ny komity fizahan-tany FICCI, hoy Andriamatoa Thackeray fizahan-tany any India ao Maharashtra dia azo averina velona amin'ny fomba roa, ny iray hampiroboroboana ny toerana haleha ary ny iray hafa amin'ny famoronana toeran-kaleha ary fananganana indostria eo an-toerana manodidina azy.
"Tokony hizara ny traikefa fizahan-tany amin'ny traikefa ara-dalàna sy tsy ara-potoana isika." Ny Governemanta Maharashtra sy ny departemanta dia miasa amin'ny ecotourism ampian'ny tanjona maharitra, hoy izy.
Mba hamporisihana ny volan'ny mpizahatany dia zava-dehibe ny mitazona ny mpizahatany izay mila fifandraisana lehibe kokoa. "Manana vola natokana isika fa mila ampiasaina amin'ny fahendrena," hoy ny minisitra. Nilaza i Thackeray raha ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny no nisy fisondrotana lehibe nomena io sehatra io tao anatin'ny iray volana lasa.
Ny governemanta Maharashtra dia namelombelona ny sehatry ny fizahan-tany an'ny fanjakana amin'ny fifantohana amin'ny vakoka, kolontsaina ary tantara eo an-toerana. "Manana ny zava-drehetra ao Maharashtra izahay," hoy izy. Ny Sahyadri, morontsiraka fotsy ary ny fitoeran'ny tigra an'ny fanjakana dia manintona ireo olona tia biby ary ny isan'ny mpitsidika dia manasongadina ihany koa ny mety ho fizahantany ara-tontolo iainana.
Tamin'ny famelabelarana ny hetsika ho avy ataon'ny governemanta hoy izy dia zava-dehibe ny mitantara ny tantaran'ny Maharashtra amin'ireo mpizahatany amin'ny alàlan'ny lova sarobidy. "Ny tsangambato ara-tantara toy ny tranobe BMC, ny Fitsarana Avo ary ny Kianja Wankhede dia hisokatra ho an'ny mpizahatany antoandro," hoy izy.
"Mino tanteraka aho fa ny sehatry ny fizahan-tany-fizahan-tany-fandraisam-bahiny dia hiteraka fidiram-bola sy asa lehibe amin'ny tontolon'ny Covid-19," hoy Andriamatoa Thackeray.
Ramatoa Valsa Nair Singh, sekretera lehibe, manamboninahitra mpanadihady, GAD, fiaramanidina sivily & fialantsasatra ary fizahan-tany sy fizahana kolontsaina (fiampangana fanampiny), ny governemanta Maharashtra dia nilaza fa nanomboka tamin'ny areti-mandringana COVID-19 dia niasa akaiky ny indostrian'ny fandraisam-bahiny sy fizahan-tany. ny governemanta Maharashtra.
Nanambara ihany koa izy fa ny Governemanta Maharashtra dia mandray fepetra mivaingana hanamafisana ny fampandrosoana fotodrafitrasa sy ny fanamorana ny asa aman-draharaha amin'ny alàlan'ny fampihenana ny isan'ny fahazoan-dàlana takiana amin'ny fitopolo ka hatramin'ny folo ary tsy ho ela dia ahena ho lisansa iray ihany izany. "Ny satan'ny fotodrafitrasa dia nomena ny indostrian'ny fandraisam-bahiny nanomboka tamin'ny 2021 mba hanamafisana bebe kokoa an'ity fizarana ity ary fananana MTDC fito any amin'ny toerana fizahan-tany manan-danja no ho vonona hampiasa vola tsy miankina", hoy izy.
Ny fanjakana, hoy izy dia miasa ihany koa amin'ny politika samihafa ho fampandrosoana ny fizahan-tany Agro, fizahan-tany hortikultura, fizahan-tany fizahan-tany, fizahan-tany kavanista, trano bongo amoron-dranomasina ary trano fialan-tsasatra. Nanambara ihany koa izy fa ny fizahan-tany amin'ny cricket sy ny fizahan-tany any Bollywood dia novolavolaina ihany koa ho ampahany amin'ny fizahan-tany fizahan-toetra ary ny departemanta koa dia miasa amin'ny fampiharana finday iray izay ho mora ho an'ny mpizahatany rehetra mitsidika ny fanjakana. "Maharashtra no ho vavahady fizahan-tany Indiana atsy ho atsy," hoy Ramatoa Singh.
Andriamatoa Ranveer Brar, Chef an'ny olo-malaza fanta-daza dia nilaza fa misy ny revolisiona mahandro sakafo an-trano eo amin'ireo mpahandro ao an-trano ary tonga ny fotoana handrafetana, hanaraha-maso ary hanodinana ny indostrian'ny fandrahoana sakafo ao an-trano.
Dr Jyotsna Suri, filoha teo aloha - FICCI, filoham-pirenena - Komity fizahan-tany FICCI ary CMD - Vondron'olona mandray vahiny Lalit Suri, dia nilaza fa hamelombelona ny indostrian'ny fizahantany any India ny fizahan-tany any an-toerana. Nilaza koa izy fa mikendry ny hitondra synergy eo amin'ny fanjakana izahay. Ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny dia hampiverina ny fihavanan'ny toekarena indianina.
Andriamatoa Sanjoy K Roy, Filoha mpiara-mitantana, Komity Zavakanto sy kolontsaina FICCI ary talen'ny fitantanana, Teamwork Arts Pvt Ltd dia nilaza fa tokony hampirisika ny asa tanana eo an-toerana isika ary hampivelatra ny teknikan'ny asa tanana eo an-toerana ary hitondra azy ireo any amin'ny toerana lova kely kokoa hampisondrotra ny indostrian'ny fizahantany.
Andriamatoa Dipak Deva, filoha mpiara-mitantana, Komity fizahan-tany FICCI ary talen'ny fitantanana, SITA, TCI & Distant Frontier dia nilaza fa Maharashtra dia manome traikefa samihafa, ary tsy maintsy mifantoka amin'ny famoronana traikefa isika.
Andriamatoa Dhruv Shringi, filoha lefitra, Komity fizahan-tany FICCI & mpiara-manorina & tale jeneraly, Yatra Inc dia nilaza fa nibolisatra mafy ny fizahan-tany ao India tao anatin'izay volana vitsy lasa izay ary miaina amin'ny vanim-potoana matetika misy fiatoana kely isika.
Andriamatoa Anil Chadha, Filoha mpiara-miasa, Komity fizahan-tany FICCI ary Lehiben'ny tompon'andraikitra, ITC Hotels dia nilaza fa misy famantarana maitso fa misy ny zavatra miandry eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny.
Andriamatoa Dilip Chenoy, sekretera jeneraly FICCI, dia nilaza fa i Maharashtra dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra ho an'ireo mpizahatany nasionaly sy iraisam-pirenena.
Ny fivoriana ifanakalozana dia natrehan'i Rtoa Aditi Balbir, Tale mpitantana, V Resorts, Ramatoa Vineeta Dixit, Head Public Politika India, Airbnb, Andriamatoa Anant Goenka, mpiara-mitantana, FICCI Filan-kevitry ny fanjakana Maharashtra ary ny Tale Mpanatanteraka, Indian Express Group , ary Andriamatoa Ashish Kumar, Mpiara-miasa, Komity Teknolojia momba ny fizahan-tany FICCI & Mpiara-mitantana, Agnitio Consulting.
Ny anaran'ireo minisitry ny fizahantany 35 UNWTO dia mikendry ny hitaona ny fifidianana
Ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia mankalaza ny faha-250 taonan'ny nahaterahan'i Ludwig van Beethoven